समस्या समाधान गर्ने कि समस्या संग रमाउदै बस्ने ? – Koshi Post
Home/समाचार/समस्या समाधान गर्ने कि समस्या संग रमाउदै बस्ने ?
Koshi Post May 30, 2019
यो देशका समस्या कहिले सकिन्छन ? मधेशी मुलकै नेपाली डा. रामवरण यादब राष्ट्रपती हुनु भयो, मधेशी मुलकै उपराष्ट्रपति परमानन्द झा हुनु भयो । मस्तिका साथ शान र मानको जीवन बाच्नु भयो तर पनि मधसी जनताका मुद्दा सकिएनन ।
सुशिला कार्की सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनु भयो, ओनसरी घर्ती संसदको सभामुख हुनु भयो र बिद्या देवी भन्डारी यो राष्ट्रको दुई-दुई पटक राष्ट्र प्रमुख हुनु भयो अझैं महिलाका मुद्दा सकिएका छैनन् ।
सबै जातिका भुसतिघ्रेहरु राज्यसत्ताको नेतृत्वमा साम, दाम दन्डभेद सबै प्रयोग गरेर पुगे तर जातीय मुद्दा कहिले पनि सकिदैनन । यस्तो चरित्रहिन पाखन्डपुर्ण राजनीतिक आवरणको धन्दाले र यस्ता भ्रष्ट मानिसहरुका बिवेकले यो राष्ट्रलाई जिवित राख्न सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रष्टछन् ।
नेपाली जातिलाई यस राष्ट्रभित्र एकापसमा लडाई गराउँदै समाप्त पार्नका लागि देशी बिदेशी तत्वहरुले बिगत राजनीतिक नारा अघि सार्दै लडाई गराए, अब जात, भाषा र धर्मका मुद्दा उठाएर नेपालीलाई लडाईमा हाल्ने प्रपन्च गर्दैछन् । दुखको कुरा नेपाल राष्ट्र समाप्त पार्न र नेपाली जातिलाई समाप्त पार्न यो जघन्य अपाराधिक कृयाकलापमा नेपालका राजनीतिक दलकै नेताहरु लागि परेका छन् । मलाई सम्झना ताजैछ, २०४६ साल भन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र यस्तो थिएन ।
राज्यको तागत राष्ट्रिय अन्तर्राट्रिय स्तरमा बलियो ढंगले स्थापित थियो । साशकहरुको मान र मर्यादा पनि निकै उच्च प्रकारको शानदार थियो । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा पनि एक—एक प्रकारले बलियो भरिलो नै थियो ।
कुनै पनि क्षेत्रमा बिदेशिको खासै कुनै भुमिका देखिदैन थियो । हाम्रो स्वधर्मका बारेमा यस्तो प्रकारको लज्जाबोध हुने गरि बिचलन र बिवाद्को एक शब्द पनि सुन्न पाईदैन थियो । हो हाम्रा केही रुढिवादी संस्कार र केहि बिचित्रका सामाजिक सभ्यता पनि थिए, जुन क्रमश नेपाली जनताले स्वयंम अस्वभाविक ठान्दै आफै परिवर्तन गर्दै थिए ।
म कर्णालीमा जन्मेको हुनाले त्यहा छुवाछुतको निकै ठूलो समस्या थियो ।
जब म बि.सं. २०४३ साल तिर काठमाडौं अध्यनका लागि आए, तब मैले बुझे यो त गलत कुरा रहेछ । त्यसपछि मैले गाउँमा गएर छुवाछुत गर्न हुँदैन भनेर दलित भनिएका दाजुभाईहरु संग सबै कुरा मैले व्यत्तिगत रुपमा चलाए ।
मलाई के थाहा थियो भन, समाज बल प्रयोग गरेर परिवर्तन हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । एउटा पक्षलाई बल प्रयोग गरेर दबाउँदा अर्को पक्षलाई चोट पुग्न सक्छ र सामाजिक रुपमा त्यसले बिवाद पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले समाजका सचेत नागरिकहरुले यस्ता बिसंगतिहरुलाई बिस्तारै हटाउदै जानुपर्छ भन्ने ठानेको थिए ।
२०४६ सालको परिवर्तनले कानुनी रुपमा यस्ता बिकृतिलाई बर्जित गर्ने प्रयास गरे पनि राज्यले व्यवहारमा लागू गर्न सकेन र समाजका बिकृतिहरु कायम नै थिए । मैले माथि भने, समाजलाई बल प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । ठिक त्यसको बिपरित जब माओवादिको आवरणमा देशमा युद्धको सुरुवात गरियो, त्यो युद्धले त्यही सामाजिक कुसंस्कारलाई अत्यन्तै महत्वका साथ उठायो र त्यही अछुत भनिएको वर्गलाई युद्धमा होमिन बाध्य पार्ने रबैया राज्य र युद्धरत दुबै पक्षले प्रदशन गरे ।
सामाजिक रुपान्तरणका नाममा युद्ध र क्रान्ती हाक्नेहरुले आज पनि सामाजिक रुपमा ती बिकृती र बिसंगतिहरु कायम छन् भन्ने कुरा बुझेकाछन । आन्दोलन र क्रान्ति गर्नेहरुको उदेश्य केवल सत्ता र शक्तिमा पुगेर रवाफिलो जीवन बाच्नु मात्र थियो । उनिहरुले आफैले उठाएका सामाजिक मुद्दा जहाँका त्यही छोडेर सत्ता र सास्वादनको घनचक्करमा नराम्रो संग फस्न पुगे ।
परिवर्तनका नाममा गरिएका आन्दोलन र क्रान्तिले राष्ट्र र नेपाली जनतालाई जुन हदको दुखद अवस्था सामना गर्नु प¥योे, त्यसको बदलामा उपलब्धिको सट्टा थप विकराल समस्यामा नेपाल र नेपालीलाई फसाउने काम गरिएको छ । नेपाली जनताको सामाजिक एकता बलियो हुँदैन थियो भने देशी बिदेशी शत्रुहरुले पहिलो संविधान सभाकै समयमा नेपाल राष्ट्रलाई जातीय दङ्गामा फसाउने प्रपन्च गरि सकेका थिए, जुन सफल हुन सकेन ।
कसैलाई भ्रम नरहोस, नेपालका नेताहरु नेपाल र नेपालीको हित र सुरक्षाका निमित्त राज्यसत्तामा बसेर काम पट्टकै गरि रहेका छैनन् । किन कि उनिहरुका अन्नदाता र नेपालको सत्ता र शक्तिमा राख्ने बिधाता बिदेशीहरु हुन् । नेपाली जनतालाई र बिदेशिलाई यदाकदा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था चलाई रहेकाछौ भनेर देखाउने केवल बाध्यता मात्र हो । यस्तो अप्रजातान्त्रिक र गैरन्यायिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक राजनितिक ब्यवस्था हो भनेर सचेत नागरिकले पत्याउनै सक्दैन ।
नेपाली आम जनताले गम्भीर भएर सोच्ने समय आयो । किन कि हाम्रो सामाहिक एकता र राष्ट्रिय एकतालाई खन्डित गर्दै नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्ने र नेपाली लाई समाप्त पार्ने चक्करमा बिदेशिहरु लागि परेका छन् त्यो अपराधलाई सघाउने र सहज वातावरण बनाई दिनका लागि नेपालका राजनीतिक दलका धेरै जसो नेताहरुले खुलेरै बिदेशिलाई मद्दत गरिरहेका छन् यो निकै खतरनाक कुरा हो ।
हामीले हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखन्डता र स्वाधिनताको रक्षा गर्नका लागि राजनीतिक दलका झन्डालाई छोडेर राष्ट्रिय झन्डामा गोलबद्ध हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको निर्माण र सुरक्षाका निमित्त त्याग र बलिदान दिने र भद्र तरिकाले देशको आत्मसम्मान र नेपाली स्वाभिमान उच्च बनाउनका लागि इमानदारी पुर्वक आफ्नो बुताले सके सम्मको काम गर्ने राजाहरुले बाहेक देशप्रति ईमान्दार अर्को संस्था र व्यत्ति देखिएन ।
नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्न र नेपाली जनताको जीवन सुरक्षित गर्ने सर्तमा प्रजातान्त्रिक सोच र बिवेक सहितको राजसंस्था र राजा आम नेपालीले खोजी गर्नुको बिकल्प छैन । यो कुनै व्यत्तिको रहरको मात्र कुरा होईन, नेपाल जोगाउने र नेपाली भएर बाच्न चाहने नेपालीका लागि आजको बाध्यता हो ।
एउटा अर्को ध्रुवसत्य कुरा के हो भने नेपालको राजसस्था र राजाले नेपाली युवाहरु, चाहे ती जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्त र बिचारका हुन् जुनसुकै जाति र समुदायका हुन् उनिहरुसंग राजा स्वंयम् आफै खुल्ला रुपमा बहस र छलफलमा आउनुपर्छ । किन कि नेपाल राष्ट्र कस्तो बनाउने, हाम्रो सामाजिक सुरक्षा अवस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा युवाहरुको सहयोग, सहभागिता र सुझावका आधारमा मात्र सम्भव हुनेछ । अन्यथा कुनै पनि ठोस काम गर्न सम्भव छैन । देशको बिकास गर्ने र नेपाल राष्ट्र र नेपालीको जीवन सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी स्वयम् नेपाली युवाहरुले लिनुपर्ने समय आएकोछ ।
युवाहरुलाई सधैं कमजोर ठान्ने र युवाहरुका काँधमा चढेर राष्ट्र हाक्ने गलत राजनीतिक धन्दाको अन्त्य राजसंस्थाले गर्नुपर्छ । जबसम्म राजसंस्था र नेपाली जनताको पारिवारिक सम्बन्ध कायम रहन सक्दैन तबसम्म नेपाल सुरक्षित रहन सक्ने कुनै सम्भावना देखिदैन । किन कि आजको देशको अवस्थाले यही संकेत गरिरहेको छ ।
नालायक साशकहरुले बिगत एक दशक सम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई युद्धमा फसाउने जुन अपराध गरे, फेरि त्यही अपराध गर्दैछन् । यस्ता अपराधिक तत्वहरुलाई नेपालीले जति सम्म राज्यसत्तामा राख्नेछन त्यतिनै कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य हुनेछन् ।
अपराध केपी शर्मा ओली नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस नेपाली चलचित्र प्रचण्ड मात्रिका सरकार
धरान हरियाली वन समूहको आवास गृहमा अक्सिजनसहित तत्काल २५ बेड आइसोलेसन सेन्टर सन्चालन गरिने
जापनले नर्सिङ केयर गिभरका लागि नेपालमा फेरि परिक्षा सञ्चालन गदै
कांग्रेस नेताको निधन